October 2019 - Ministry of Education | Page 3
October 24, 2019 - 9:00 pm | News
Comments Off on အမျိုးသားပညာရေးမဟာဗျူဟာစီမံကိန်း (၂၀၂၁- ၂၀၃၀) ရေးဆွဲပြုစုရေး ပထမအကြိမ် အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ
နေပြည်တော်အောက်တိုဘာ၂၄ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမျိုးသားပညာရေးမဟာဗျူဟာစီမံကိန်း (၂၀၂၁-၂၀၃၀) ရေးဆွဲပြုစုရေး ပထမအကြိမ် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို ယနေ့နံနက်၉နာရီတွင် နေပြည်တော်၊ မင်္ဂလာသီရိဟိုတယ်၌ ကျင်းပရာ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီး တက်ရောက်အမှာစကား
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီး မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တီမောလက်စတေနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Joao Freitas de Camara နှင့်တွေ့ဆုံ
Date : 23 October, 2019
October 23, 2019 - 8:28 am | Album
Comments Off on ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီး မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တီမောလက်စတေနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Joao Freitas de Camara နှင့်တွေ့ဆုံ
နေပြည်တော် အောက်တိုဘာ ၂၃ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီးနှင့် တာဝန်ရှိသူများသည် ၂၃-၁၀-၂၀၁၉ ရက် နံနက် ၁၁ နာရီခွဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တီမောလက်စတေနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီး မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျာမနီနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Thomas KarL Neisinger နှင့်တွေ့ဆုံ
October 23, 2019 - 8:23 am | Album
Comments Off on ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီး မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျာမနီနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Thomas KarL Neisinger နှင့်တွေ့ဆုံ
နေပြည်တော် အောက်တိုဘာ ၂၃ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီးနှင့် တာဝန်ရှိသူများသည် ၂၃-၁၀-၂၀၁၉ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီတွင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျာမနီနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီး 360 Degree EduTech Company Limited(360ed) မှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် တွေ့ဆုံ
Date : 22 October, 2019
October 22, 2019 - 9:02 am | Album
Comments Off on ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီး 360 Degree EduTech Company Limited(360ed) မှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် တွေ့ဆုံ
နေပြည်တော် အောက်တိုဘာ ၂၂ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီးနှင့် တာဝန်ရှိသူများသည် ၂၂-၁၀-၂၀၁၉ ရက် နေ့လည် ၁၃ နာရီတွင် 360 Degree EduTech
Total Hits : 1141863074